Home Wararka Sawiro muujinaya ciidanka Itoobiya oo maquuninaya Shacabka Baydhabo (Video)
Sida shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisaba ula socdaan ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay ku xasuuqeen magaalada Baydhabo dad shacab ah iyaga oo taageerayo qorshaha MW Farmaajo.
Hadaba waxa isa soo taraya xogag ku saabsan sida loo xasuuqay shacabka ku dhaqan Magaalada Baydhabo. In ka badan 21 qofood ayaa naftooda kuwaayay kacdoonkii Baydhabo iyo xasuuqii ciidamada Itoobiyaanka. Sid ka muuqata sawirka hoos ku qoran waxaad arkaysaa ciidamo Itoobiyaan ah oo ku hubaysan hub casri ah oo dul taagan xildihibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Previous article27 000 Eritreans ‘seeking refugee status’ in Ethiopia
Next articleMaxaadna Ogeeeyn oo xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay
Ciidamo maanta laga dajisay Dhuusaamareeb
Ra’iisul wasaare Ivica Dacic oo safar qarsoodi ku yimid Muqdisho...